Vidio ny Smart Case anao 75% mora kokoa | Vaovao IPhone
Vidio ny Smart Case anao 75% mora kokoa
Raha mieritreritra ny hividy ny iray amin'ireo ianao Cases Smart vaovao ho an'ny iPad anao 2 na iPad vaovao satria tianao ny fiarovana feno izay mandray anjara atolotray anao a safidy amin'ny vidiny ambany kokoa ho an'ny manamboninahitra. Tiako manokana ireto fonony feno ireto satria ny Smart Cover dia tsy miaro ny lamosina alimo. Ny Smart Case sy ireo "copie" ireo dia miaro ny ao ambadika sy ny eo aloha ary koa manana andriamby izy ireo hanodinana sy hamonoana ny efijeryo rehefa manokatra ny sarony.
Afaka mahita azy ireo ianao amin'ny loko rehetra, ny sasany aza tsy natolotry ny Apple, ary miaraka vidiny 12,88 euro ny vidin'ny fandefasana dia ao koa, ampahefatry ny vidin'ny Apple tany am-boalohany, amin'ny vidiny mitovy dia ividiananao loko efatra samy hafa!
Mamporisika anao izahay hanafatra ny maimaim-poana ny fandefasana, Roa herinandro vao mody, fa raha mangataka fanaterana mivantana ianao dia atahorana ho voasakana amin'ny fadin-tseranana, amin'ny fandefasana maimaim-poana dia tsy mitranga izany.
Smart Case mena manga sy volomboasary
Smart Case Green, Mainty sy Gray
Smart Case Black, Pink ary White
Modely sy loko hafa
Fanazavana fanampiny - Smart Cover + fiarovana aoriana ho an'ny ankizy (Pad vaovao sy iPad 2)
Rohy hitahiry - Miniinthebox
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Vidio ny Smart Case anao 75% mora kokoa
Carlosmartinc dia hoy izy:
Mahatsiravina izy ireo, tsy mitovy endrika amin'ny tany am-boalohany izy ireo, ary ambonin'izany ireo lavaka izay voakapa ny kopia madinidinika dia aza laniana amin'ny volanao ..
Valiny tamin'i Carlosmartinc
Izy ireo dia tsara kalitao? Raha tsy amin'ny farany dia ho tsara kokoa ny hividy ilay Apple ofisialy ...
Polloux dia hoy izy:
Afaka mangataka fandefasana any Shily ve ianao ???
Valiny amin'i Polloux
Raha vitanao… Tsy maintsy manana kaonty miniinthebox ianao…. Ary apetraho any Shily ny adiresinao ... In-2 no nanafatra .. Ary efa tonga amiko indroa ny fonosana ... Izay raha ... Angataho amin'ny fandefasana ara-dalàna dia maharitra iray volana .. Fa raha mangataka izany ianao amin'ny fandefasana entana, ny zavatra azo antoka indrindra dia ny hampiakarany anao amin'ny fadin-tseranana… Izany no nitranga tamiko .. Noho izany antony izany no andefasako entana amin'ny alàlan'ny fandefasana miadana….
Carlosmart dia hoy izy:
Nofafany ny hevitro !!! Mandresy amin'ny fanaovana doka ve ianao sa ahoana? Efa nolazaiko tamin'ny lahatsoratra iray fa nofafan'izy ireo aho fa tampoka ity, tsy manana lavaka nolavahana tsara akory izy ireo, aza laniana ny volanao!
Valiny tamin'i Carlosmart
Mety tsara ve izy amin'ny ipad vaovao? mandeha ve ny hidin-trano rehefa manidy?
Salam Malecum dia hoy izy:
Misaotra betsaka!!! Nanafatra voasary aho !! Manantena fiarovana tanteraka ho an'ny iPad vaovao aho!
rehefa tonga aho dia holazaiko anao manao ahoana
Valiny tamin'i Salam Malecum
NY mpandalina dia hoy izy:
Nividy ity tranga ity aho fa nieritreritra fa hitovy amin'ny case smart ... fahadisoam-panantenana, manana kalitao tena ratsy, tsy mety tsara ....
Valio amin'i THE Analyst
Fomba famafana telo hisafidianana ny Chrome ho mpitety tranonkala (Cydia) anao
Safari Download Manager 2.0 Azo alaina izao (Cydia)